एफिलियट मार्केटिंगका फाइदाहरू Martech Zone
फोरेस्टर भविष्यवाणी गर्दछ कि एफिलिएट मार्केटिंग खर्च २०१ grow सम्ममा billion अर्ब डलरमा बढ्नेछ, १ compound% को वार्षिक यौगिक वृद्धि दरमा वृद्धि हुनेछ। एउटा निर्णय जुन हामीले सुरुमै साथ गरेका थियौं सर्कप्रेस प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई एक सम्बद्ध बनाउनु थियो। त्यस रूपमा, ईमेलहरू पठाइएको रूपमा, यदि पाठक लि reader्क द्वारा संचालित लिंकमा क्लिक गरेपछि साइन अप गरियो भने, ईमेल पठाउने व्यक्तिको इनाम थियो। यो एक रणनीति हो जुन प्लेटफर्महरू जस्ताको साथ आकास गयो ड्रॉपबक्स… जहाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई थप ठाउँ प्रदान गरिएको थियो जब उनीहरूका साथीहरूले साइन अप गरे।
तपाईंको ब्रान्डलाई स्वतन्त्र रूपमा विज्ञापन गर्नको लागि सम्बद्धहरूको सेटको लागि एक कमिशन भुक्तान गर्दा - कहिलेकाँही अनलाईन मार्केटिंग अवसरहरूको बेवास्ता गरिन्छ। तर ती परिचितहरूका लागि, एफिलियट मार्केटिंग, यसको अनौंठो लाभहरूको साथ, एक प्रभावी अनलाइन मार्केटि। रणनीतिको एक आवश्यक हिस्सा हो।
इन्फोग्राफिकले चित्रण गरेझैं, एफिलियट मार्केटिंगको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको यो हो कि यो कम जोखिम हो, प्रदर्शन मार्केटिंग रणनीतिको लागि भुक्तान गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो प्रयासहरूमा कसरी सम्बद्ध मार्केटिंग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
टैग: संबद्धसंबद्ध मार्केटिङसम्बद्धव्यापारसर्कलकम्प्युटरसामग्री मार्केटिङई-वाणिज्यई-मेल मार्केटिंगबिक्रेताइन्टरनेटखोजशब्दकुंडेब्रान्डमार्केटिङनेटवर्कअनलाइन मार्केटिंग सम्मेलनअनलाइन स्टोरप्रति क्लिक भुक्तानी गर्नुहोस्भुक्तानीपीपीसीबिक्री सक्षमताएसईओसेवायातायातभेक्टरverkaufenवर्टरीस्पार्टनरविज्ञापनwww
आउटबाउन्ड मार्केटिंगको अकाल मृत्यु
२०१ Aw मा अद्भुत चीजहरू ब्रांडहरूले सोशल मीडियामा गरे
जनवरी 31, 2017 मा 6: 33 एएम
म खुशी छु कि मैले तपाईको ब्लगमा ठोकर खाएँ किनकि म मेरो सम्बद्ध स्थानमा बिक्री प्राप्त गर्न मद्दत खोज्न धेरै चिन्तित छु। म यो वर्षौं देखि गर्दै छु तर मेरो साइट मरेको छ। मलाई आशा छ कि यसले मेरो सम्बद्ध साइटलाई बढावा दिनेछ। तपाईंलाई धन्यवाद! तपाईबाट थप सम्बद्ध सुझावहरू पढ्नको लागि आशा छ।